Marii Abboottin Qabeenya qopheeysiteen:Ibsa ijjannoo abbaa qabxii 10 - Kichuu
HomeAfaan OromooNewsMarii Abboottin Qabeenya qopheeysiteen:Ibsa ijjannoo abbaa qabxii 10
Marii Abboottin Qabeenya qopheeysiteen Ibsa ijjannoo abbaa qabxii 10
Marii Abboottin Qabeenya qopheeysiteen
Nuti Aktiivistoonni fi ogeeyyin miidiyaa Oromoo fi Amaaraa haala rakkoo nageenyaa biyyaa fi kallattii furmaata gara fuulduraa irratti waliin hojjachuuf marii guyyaa lamaaf geggeeffamaa ture xumuramuun ibsa ijjannoo abbaa qabxii 10 haala armaan gadiitti baafannee jirra.
1.barreeffamoota fi yaadolee jeequmsaa fi addaan fageenyaa sabootaa kaasuu danda’an irraa of qusachuu, wantoota saba lamaan jiddutti jibba facaasan akka hin babal’anne gochuu fi hojiiwwan saboota lamaan walitti hidhan irratti hojjachuuf walii gallee jirra.
2.Nageenyi madda waan hundaa waan ta’eef dursa nageenyaf kennuun rakkoon nageenyaa iddoo gara garaatti mul’atu akka furamu waliin irratti hojjachuu irratti walii gallee jirra.
3. Rakkoo manneen barnootaa ol’aanoo keessa jiru hiikuu fi nageenya barattootaa eegsisuun barnoonni bakkatti akka deebi’u taasisuuf qaamotni dhimmi isaa ilaalu hundi waliin ta’uun akka hojjatan waamicha ni dhiyeeessina.
4. Hawaasa naannoo, barattoota, hooggansa manneen barnootaa, qaamolee nageenyaa fi dhaabbilee midiyaa faana haalli tasgabbii fi nageenni manneen barnootaa ol’aanoo fi biyyattii iddoo gara garaa keessatti ittiin dhufu irratti mari’achuun falli waaraa akka argamuuf waliin hojjachuuf walii gallee jirra.
5. Qaamolee nageenya barattootaa fi manneen barnootaa fi iddoo gara garaatti jeeqan akkasumas lubbuun barattootaa akka darbu taasisan sabaan osoo addaan hin qoodin seeratti dhiyaatanii murtee akka argatan waamicha ni taasisna.
6.Hooggansi Manneen barnootaa ol’aanoo rakkoo uumameef gadi taa’ee qaama dhimmi ilaalu wajjiin mari’achuun fala waaraa akka kaayu yaamicha ni dhiyeessina.
7.dhaabbileen miidiyaalee gara garaa ajandaa ololaa fi walitti bu’iinsa uumuu danda’an irraa fagaatanii odeeffannoo amanamoo fi madaala’aa qofa irratti akka hojjatan waliin irratti dhiibbaa gochuuf walii gallee jirra.
8. Rakkoo nageenyaa akka biyyaatti jiru hiikuuf sabaa fi sablammii biyyattii wajjiin ciminaan hojjachuun tasgabbii fi nageenni waaraan akka dhufu qaamoleen dhimmi ilaallatu hundi xiyyeeffannaan akka hojjatan waamicha ni dhiyeessina.
9.barattoota sababa rakkoo nageenyaatif manneen barnootaa irraa buqqa’aniif hawaasni deeggarsa akka taasisu waamicha dhiyeessuu
10. Rakkoo nageenyaa fi haala siyaas diinagdee saboota lamaanii cimsuu irratti waliin hojjachuuf waliif gallee jirra.
Dhuma irratti dhimmi nageenyaa bu’uura waan hundaa waan ta’eef rakkoo nageenyaa akka biyya keenyaaatti jiru hiikuuf Sabaaf Sablamoot waliin taanee Forum dhaabun qaama dhimmi ilaallatu hunda hirmaachisuun akka hiikatu irratti waliin hojjachuuf walii gallee jirra.
Via: Hamza Borana
Tasfaayee Sh Dhibbisaa